FBC - Kiristiin Laagaard Pireezdaant Mulaatuu fi Muummee Ministiraa Haayilamaariyaam waliin mari’atan
Kiristiin Laagaard Pireezdaant Mulaatuu fi Muummee Ministiraa Haayilamaariyaam waliin mari’atan
Finfinnee, Mudde 5, 2010 (FBC) Pireezdaantiin Mootummaa FDRI Mulaatuu Tashoomaa Hoggantuu Dhaabbata Maallaqaa Idil-addunyaa (IMF) Itiyoophiyaa daawwachuutti jiran Kiristiin Laagaard waliin masaraa mootummaatti mari’ataniiru.
Marii kanaanis dhimma hariiroo Itiyoophiyaa fi IMF fooyyessuu irratti mari’ataniiru.
Hoggantuun kun marii booda turtii gaazexeessitoota waliin qabaatanitti Itiyoophiyaa daawwachuu kan dhufan ‘moodeela’ dinagdee biyyattiitti hojiitti hiikamaa jiru ilaaluufi jedhaniiru.
Biyyattiin guddina dinagdeen milkaa’ina galmeessisaa akka jirtudha Laagaard kana kaasan.
Turtii pireezdaanticha waliin qabaatanittis filannoowwan guddinaaf mijatoo ta’an fi rakkoolee mudatan irratti mari’achuusaanii eeraniiru.
Itiyoophiyaan hundeessituu fi miseensa Dhaabbata Maallaqaa Idil-addunyaa akkuma taate hariiroo gaarii akka qabaatan dandeessisuu irratti mariin geggeffamuu isaa Dubbi-himaan Ministeera Dhimma Alaa Obbo mallas Alam eeraniiru.
Obbo Mallas Marii pireezdaant Mulaatuu Tashoomaa fi Hoggantuun IMF Kiristiin Laagaard taasisan gaazexeessitootaa ibsaniiru.
Kaayyoon daawwannaa hoggantittii guddina dinagdee Itiyoophiyaan waggootan kurnan darbanitti galmeessifte qaamaan dhufanii akka arganiif ta’uudha kan kaasan.
Pireezdaant Mulaatuun dhaabbatichi guddina dinagdee Itiyoophiyaa, bu’uura misoomaa fi ijaarsa dhaabbileef deggarsa kenneef galateeffataniiru.
Carraaqii dinagdee hirmaachisaa fi hiyyeessa irratti xiyyeeffatu Mootummaan Itiyoophiyaa geggeessu irratti pireezdaantichaa fi hoggantuttiin mari’achuunsaanii himameera.
Kiristiin Laagaard Itiyoophiyaan baqattoota hedduu keessummeessaa akka jirtu kaasanii, carraaqii biyyoota ollaatti nagaa fi tasgabbiin akka bu’uuf taasiftu dinqisiifataniiru.
Kana malees Hoggantuttiin Muummicha Ministiraa haayilamaariyaam dassaalany waliin dhimmoota dhaabbatichaa fi itiyoophiyaa irratti fi kaan gara-garaa irratti mari’ataniiru.
Har’uma sa’a boodas Zoonii Industirii Duukam nidaawwatu.
Dhaabbati Maallaqaa Idil-addunyaa erga hundaa’ee waggaa 72ffaa isaa yoo ta’u, Kiristiin Laagaard hoggantuu dhaabbatichaa jalqabaa Itiyoophiyaa daawwatan ta’aniiru.
Hoggantuttiin Koomishinii Dinagdee Afriikaa fi Gamtaa Afriikaatti argamuun haasaa kan dhageessisan yoo ta’u, Paarkii Industirii Duukamii fi Hospitaala Fiistullaa Hamliin nidaawwatu.
Itiyoophiyaa miseensa Dhaabbata Maallaqaa Addunyaa kan taate waggaa 72 har’aa A.L.A Mudde 27,1945 yoo ta’u, biyyoota miseensa dhaabbatichaa 189 keessaa tokkodha.
Waggoota 72 darbanitti keessumaa A.L.A 1996 hanga 2010 gidduutti waggoota jiran keessatti Itiyoophiyaan karaa dhaabbatichaa liqii fi deggarsa teeknikaa addaa akkasumas deggarsa ‘idaa’ alaa salphisuu argatteetti.
Daawwannaan hojii guyyoota lamaa Kiristiin Laagaard Finfinneetti taasisanis fudhatama sadarkaa ardii fi idil-addunyaatti Itiyoophiyaan qabdu tilmaama keessa kan galche ta’uu Ministeerri Dhimma Alaa ibseera.
Daawwannaan Hoggantuu Dhaabbata Maallaqaa Idil-addunyaa kun biyyattiin hanga yoonaa dinagdeen, siyaasaan fi gama jireenya hawaasummaan injifannoowwan galmeessifteef beekamtii kan kennudha jedheera ministeerichi. Faasikaaw Taaddasaatu gabaase.
Oduuwwan Biroo « Ityoophiyaan imaammata bulchiinsa atoomiikii fi haftee raadiyooloojii qabaachuu qabdi jedhame	Deeggarsa abbootii qabeenyaatiin rakkoo bishaan dhugaatii Sabbataa hiikuuf hojjetamaa jira »